Anthony Davis Yemwana Nhau Plus Untold Biography Chokwadi: Lifestyle
musha nyika dzakabatana Vatambi veBasketball Anthony Davis Childhood Nhau Plus Untold Biography Facts
CB inopa Nyaya Yakazara yemuAmerican basketball mutambi anonyanya kuzivikanwa nezita rekuti ""The Browser“. Yedu Anthony Davis Yevacheche Nyaya uye Untold Biography Chokwadi inounza kwauri nhoroondo yakazara yeakajeka zviitiko kubva paudiki hwake nguva kusvika zvino.
Kuongororwa kweiyo NBA nyeredzi kunosanganisira hupenyu hwake hwepakutanga, nhoroondo yehupenyu pamberi pemukurumbira, nhoroondo yemhuri uye hupenyu hwega. Zvikuru zvakadaro, zvimwe OFF uye ON-Screen zvishoma-zvinozivikanwa chokwadi nezvake.
Hongu, munhu wose anoziva ndiye mumwe wevatambi vemarefu mabhasiketi muUnited States. Nekudaro, vashoma chete ndivo vanofunga Anthony Davis 'biography iyo iri inonakidza kwazvo. Zvino, pasina imwezve ado, ngatitangei.
Anthony Davis Yemwana Nhau - Hupenyu hwepakutanga uye Mhuri kumashure
Anthony Marshon Davis Jr. akazvarwa pazuva re11th raKurume 1993 muChicago muIllinois, United States. Akanga ari wekupedzisira pavana mapatya akazvarwa kuna baba Anthony Davis Sr. uye kuna amai vake Erainer Davis.
Nezvemhuri yake, Davis ndeweAmerica wenyika yeAfrica yemadzinza nemaAfro-America midzi.
Kukura kumaodzanyemba kweChicago pamwe chete nasisi vake mukuru, Antoinette uye mapatya hanzvadzi Lesha, mudiki Davis akatanga kushuvira kwakanyanya kwe basketball pazera diki kwazvo uye akatamba mutambo uyu nenhengo dzemhuri yake.
Vabereki vaDavis vaisangova vekuda zvemitambo asi vaviri vaisaparadzaniswa vakamurera iye pamwe nevakoma vake nenzira ine hutano uye vaigara vachitsvaga zvakanakira ivo.
Nokusingaperi, mukomana muduku akakura mukukwirira uye uchenjeri hukuru hwakanaka mu basketball uye mudzidzi.
Anthony Davis Dzidzo:
Chinozivikanwa pakati pechikoro chaDavis pakudzidza yaive dzidzo yake yechikoro chepamusoro pa 'maonero echirter chikoro' muChicago. Chikoro icho chakakoshesa zvakanyanya kuita kwedzidzo chakange chisina gymnasium kana chero chikuva chinosimudzira mutambo.
Nekudaro, Davis nevamwe vake vemitambo vakaongorora dzimwe nzira mukutamba mutambo uyu kusanganisira kudzidzira kuchechi iripedyo.
Mhedzisiro yacho yaive kujeka kushoma kwakatora kusvika pagore rake rejuniya paakatamba zvine mutsindo AAU basketball uye akaonekwa muNike Global Dambudziko.
Yakanga isati yava nguva refu Chikoroji kusanganisira Syracuse chakatsvaka kumupa zvidzidzo. Davis zvisinei akazvipira kuYunivhesiti yeKentucky uye akatamba nokuda kweKentucky Wildcats.
Anthony Davis Biography - Mugwagwa Unoenda Mukurumbira:
Davis aive nebasa rakaoma remakorosi rakanga rafanotaurwa kare nevatariri avo vakamuzivisa kuti "ave chinhu chikuru chinotevera".
Kunyangwe aisakwanisa kutungamira timu yake kuhwina musangano we 'SEC' mukwikwidzi wenguva dzose-mwaka, akanunura fomu rake nekutungamira timu yake kuhwina iyo 2012 NCAA Men's Division I Basketball Tournament.
Anthony Davis Bio - Simuka Mukurumbira:
Maitiro ake ose gore iroro (2012) akamuona achikunda mazita akawanda mazita aisanganisira National Freshman wegore, NCAA Final Four Yekunakidza Mutambo uye Consensus nyika yose yemutambo wegore.
Davis aive nechivimbo uyo akanga atorawo mhirizhonga yegoridhe yeOlympic neSouth National team mu2012 asina ruzivo rwekutanga rweNBA, akazvitsvakira akagadzirira NBA murongwa uye akasarudzwa neNew Orleans Pelicans.
Anthony Davis Hukama Hupenyu:
Anthony haasati aroora asi nhoroondo yake yekufambidzana. Tinokuunzira ruzivo nezvehukama hwake hwekare uye hwazvino.
Chokutanga chaiva ukama hwake hwehupombwe neshamwari yebhasika, Brittney Griner. Dhiyabhorosi haana kuita hukuru hukuru muhukama hwakakurumidza kupera mushure mokunge Brittney abuda muimba yekutambira kuti ataure kuti iye ari mhandara.
Kufambira paDavis kwakatanga kufambidzana nemutambi anozivikanwa saMai Gonzales. Hwavo hwaive hukama hushoma-hwakazivikanwa hwakatanga muzhizha ra2013 husina chinyorwa chegumo zuva.
Iyo yakareba basketball mutamba iye zvino achifambidzana nemwanasikana wake wazvino Marlen uyo waakasangana naye mu2017.
Hukama hwavo hwapa kusimuka kwekuzvarwa kwemwanasikana anonzi Nala. Zvinotendwa kuti kuzvarwa kwake kuchasimbisa hukama hwevaviri ava asi vatambi vebhasikiti vanonetsa kuchengeta uye Marlen anofanirwa kushanda zvakanyanya kuti achengete murume wake.
Anthony Davis Hupenyu Hwemhuri:
Davis akaberekerwa mumhuri yevamiririri ve5 tinokuudza mashoko echokwadi pamusoro pemhuri yake.
Nezvebaba Davis: Anthony Davis Sr. ndibaba vanozvikudza avo vakabatsira mwanakomana wavo kufamba kubva kuSouthside yeChicago kuenda kuYunivhesiti yeKentucky uye pakupedzisira kuenda kuNBA kunyora.
Akagara ari padyo nemwanakomana wake uye achitsigira zvaanoedza kuita.
"Nguva imwe neimwe pandinofamba munhandare uye ndinoona zita redu kumushure kwejeri iyo, zviri kudaro surreal kwatiri. Ndinowana mazamu ebasa nguva dzose pandinozviona. Inguva huru kwandiri. Ndinogara ndiine maziso mashoma. Akazviita. Ari kurarama hope dzake. Ndiyo nguva yangu yekuzvikudza. "
Anoti Davis Sr.
Anthony anotenda kuti akagara nhaka yakakwirira kubva kuna baba vake avo vanomirawo pamakumbo e6. Iye zvechokwadi haana kuwira kure nemuti.
Nezve Davis Amai: Erainer Davis ndiye amai kuna Davis uye anomira pa 5-foot-11.
Anowedzerawo semupi wezano rinokosha uyo anoyeuchidza Davis kuti arambe akaiswa semwana anozvininipisa iye asati apiwa mukurumbira.
Nezve Davis vakoma: Anthony Davis ane hanzvadzi mbiri chete. Mukuru anoenda nezita rokuti Lesha. Akanga ari mutambi munguva yekoroji uye akatamba basketball kuDaley College.
Anotevera Davis mapatya hanzvadzi Antoinette uyo ari mukuru kwaari kweminiti chete. Hazvina zvakawanda zvinozivikanwa nezvake asi zvinofungidzirwa kuti anogona kunge akatamba basketball senge mapatya mukoma wake uye mukuru hanzvadzi Lesha.
Anthony Davis Biography - Untold Basa Rechokwadi:
Unoziva here?… Davis akatumidzwa zita remadunhurirwa rekuti “Bhurawuza” mukucherechedza tsiye dzake dzakabatana.
Kubudirira uku kwakamutungamira kuti aise mucherechedzo mazwi ekuti "Itya Iyo Brow" uye "Simudza Iyo Brow" munaJune 2012. Achipa zvikonzero zvekutama Davis akatsanangura kuti:
"Handidi kuti munhu upi zvake aedze kukura mushure mekuda kwangu uye edza kuedza kubvisa mari yacho. Ini nemhuri yangu takasarudza kuitengesa nokuti yakasiyana chaizvo. "
How much is The Brow worth worth? Pamwe mabhiriyoni eDhora.
Anthony Davis Hupenyu hweMunhu:
Davis munhu anodisa uye ane hunyanzvi uyo asides achitamba basketball anoda kudhirowa nekutamba mitambo yemavhidhiyo.
Basketball player kuonga midzi yake uye mutero kune avo vakabatsira mukurerwa kwake kwehunyanzvi kunoonekwa mumatato ake.
Pamusoro wake wekurudyi ruoko rwuri ruzivo rwemukuru wekurukuru vake, Lamont Eberhardt.
Kutsanangura ukama hwaaiva nawo nababababa Davis vanoti:
"Aireva zvakanyanya kwandiri uye aiva fan anonakidza weKobe Bryant fan. Zuva rimwe nerimwe ndaienda kumba kwake uye taitaura chete basketball uye ndinoda kuti ndiende kunze uye ndive saKobe"
Chechi yechipiri pasi pechigaro chake chepamusoro chakanaka chichireva Chicago, guta rake rokuberekwa.
Anthony Davis Mararamiro:
Iine mambure akakosha emadhora makumi matatu nemashanu emamiriyoni (sa35), Davis haagari pamusoro kana pazasi penzira yake asi anoshandisa zvakazara.
Motokari dzake dzinosanganisira chikamu chekuunganidza Mercedes Benz, Porsche 911, Rolls Royce uye Bentley Continental. Muchiedza chakafanana, anogara mune $ $ Mamiriyoni 3 kuMetairie, muJefferson Parish, Louisiana, USA.
CHOKWADI KUTI: Thanks for reading vedu Anthony Davis Childhood Story pamwe chete biography nhoroondo. At biography yemwana, isu tinoedza kururamisa uye kururamisa. Kana iwe ukaona chimwe chinhu chisingatarise zvakanaka muchinyorwa chino, ndokumbira utaure kana taura nesu!